Casharkaan oo cinwaankiisu yahay Substantive, waxaan ku siin doonaa xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan magacyada Jarmalka, oo ah ereyada Jarmalka. Waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan magacyada Jarmalka, taasi waa, magacyada waxyaabaha, ereyada, walxaha.
Saaxiibayaal, waxaan diiradda saareynaa qaababka aad u baahan tihiin inaad ogaataan iyo macluumaadka aad ugu baahan tihiin inaad ku xifdisaan mowduucyada koorsada ah ee aan daabacno si aan u baranno Jarmal. Si kastaba ha noqotee, waxaan u baahanahay inaan ku darno arrimo naxwe ahaan muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato intaad baranayso Jarmalka. Maadada aan koorsadan ku soo qaadan doono waxay noqon doontaa Magacyada Jarmalka (Substantive). Si maadadan sifiican loogu fahmo, waxaan ku bilaabi karnaa casharkeena adoo xoojinaya in si fiican loo fahmo Maqaallada Jarmalka ee aan horay u daabacnay.
Si loo qeexo magaca si kooban, waxaa loo yaqaan ereyada aan u siino dadka. Sida luuqadeena, waxaa jira noocyo sida keli keli ah, jamac, fudud, isku dhafan, aan la taaban karin, la taaban karo magacyada Jarmalka. Mar labaad, sida luuqadeena, sidoo kale waxaa jira noocyo sida isugeyn-e ee magaca. Waxaa la sheegay inay jiraan ku dhowaad 250.000 oo erey oo Jarmal ah, dhammaan xarfaha magacyada oo dhanna waxay ku qoran yihiin raasamaal, iyadoon loo eegin magacyo gaar ah ama kuwa guud. Si koobanna loo dhigo, waxay qaataan ereyada (der, das, die) oo loo yaqaan maqaallada magacyo magac kasta.
Waa macquul in la baaro magacyada luuqada Jarmalka iyadoo loo kala qeybiyo 3 hiddo. Kuwani;
Galmada Ragga (Magacyada Lab)
Genus Dheddig (Magacyada Haweenka)
Taranka Nooca (Magacyada Jinsiga ah) loo kala saaray sida.
Marka loo eego sharciga naxwe ahaaneed ee la adeegsaday, qodobkan waxaa la siiyaa ereyada labka ah ee maqaalka "der", dheddigga ereyada dhadig ee maqaalka "dhinta", iyo ereyada dhexdhexaadka ah ee maqaalka "das".
Jinsi Jarmal ah (Magacyada Lab)
Dhammaan magacyada ku dhammaanaya xarfaha -en, -ig, -ich, -ast waxaa loo yeeri karaa lab. Intaas waxaa sii dheer, magacyada bilaha, maalmaha, tilmaamaha, xilliyada, magacyada dhamaan xayawaanada raga, iyo magacyada miinooyinka iyo lacagta sidoo kale waa rag.
Taranka Haweenka Jarmalka (Magacyada Haweenka)
Magacyada ku dhammaanaya xarfaha - e, -ung, -keit ,, -ion, - in, -ei, -heit waxaa loogu yeeri karaa dhedig. Intaas waxaa sii dheer, magacyada, tirooyinka, ubaxa, webiga, webiga, geedaha iyo magacyada miraha dhammaan xayawaanada dheddigga sidoo kale waa dhadig
Taranka Jarmalka Dhexdhexaad (Magacyada Jinsiga)
Magacyada loo isticmaalo guud ahaan labada jinsi, magaalo, waddan, farac, bir iyo magacyo asal ah ayaa dhammaantood loo tixgeliyaa inay yihiin noocyo dhexdhexaad ah.
ma aha: Isugeyn guud ayaa laga sameeyay mowduuca aan soo sheegnay. Haddii aadan hubin adeegsiga ereyada, waxaan kugula talineynaa inaad qaamuuska Jarmalka u qaadato il ahaan. Qaabkan, waxaad ku baran doontaa magacyada cusub ee aad ku baran doontid adeegsiga saxda ah.
Saaxiibbada qaaliga ah, waxaan jeclaan lahayn inaan kuula socodsiino qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira boggeena, marka laga reebo mowduuca aad akhrisay, waxaa sidoo kale jira mowduucyo ay ka mid yihiin kuwa soo socda oo ku yaal degelkeenna, waana kuwan mowduucyada ay tahay inay bartayaasha Jarmalku ogaadaan.
Saaxiibbada qaaliga ah, waad ku mahadsan tahay xiisaha aad u leedahay degelkeenna, waxaan kuu rajeyneynaa inaad ku guuleysato casharradaada Jarmalka.
Haddii ay jirto maaddo aad rabto inaad ka aragto boggeena, waad noo soo sheegi kartaa adiga oo qoraal u soo diro golaha.
Sidoo kale, waad qori kartaa wixii su'aalo kale ah, ra'yi, talo bixin iyo dhaleeceyn ah nooc walba ah oo ku saabsan habka aan wax u barano Jarmalka, casharradeena Jarmalka iyo bartayada ku taal aagga kulanka.